Suuqa Iyo Maanta : Mourinho Oo Kooxihiisii Hore Ku Laabanaya, Bissouma Oo Ku Wajahan Arsenal, Chelsea Oo Xiiseeneysa Pjanic & Wararkii Ugu Dambeeyay Ee Suuqa – Garsoore Sports
Suuqa Iyo Maanta…
Suuqa Iyo Maanta : Mourinho Oo Kooxihiisii Hore Ku Laabanaya, Bissouma Oo Ku Wajahan Arsenal, Chelsea Oo Xiiseeneysa Pjanic & Wararkii Ugu Dambeeyay Ee Suuqa
Suuqa kala-iibsiga cayaartooyda ee xagaaga ayay kooxuhu isku diyaarinayaan inay ka dukaameeystaan, waxaana koox waliba lala xiriirinayaa bartilmaameedyadooda suurtagalka ah marka uu daaqada kala-iibsiga furmo 9ka bisha June ee soo aadan.
Halkanna waxaan idinkugu soo gudbineynaa wararkii ugu dambeeyay ee suuqa maanta laga qoray.
Sheekada Ugu Weyn – Mourinho Oo Doonaya Inuu Roma Keensado Qaar Kamid Ah Xiddigiihiisii Man United Iyo Spurs
Tababaraha loo caleemasaaray ololaha xiga inuu hoggaamiyo kooxda Roma ee Jose Mourinho ayaa u weecanaya xiriirkiisa Premier League-ga si uu u xoojiyo kooxdiisa Giallorossi xilli-cayaareedka soo aadan.
Labada ciyaaryahan ee Manchester United ee kala ah Nemanja Matic iyo David de Gea ayaa ka mid ah ciyaartoyda ka cayaara garoonka Old Trafford ee ku jira liiska uu doonayo Mourinho, sida laga soo xigtay Daily Mirror iyo Todofichajes.
Eric Dier iyo Pierre-Emile Hojbjerg oo ka mid ah ciyaartooydii ugu dambeysay ee Mourinho, ayaa ka mid ah ciyaartoyda Spurs ee uu doonayo saxiixooda, ayuu yiri Corriere dello Sport.
Football London ayaa sheegaya in sidoo kale Erik Lamela iyo Lucas Moura lala xiriiriyay suurtogalnimada ay ugu dhaqaaqayaan Roma iyadoo tababarihii hore ee Tottenham Mourinho uu isku diyaarinayo inuu bedelo Paulo Fonseca oo hadda Roma leyliya kahor xilli ciyaareedka 2021-22.
Corriere dello Sport ayaa warinaya in Real Madrid iyo Paris Saint-Germain ay indhaha ku hayaan xiddiga Napoli ee Fabian Ruiz iyo midka Lazio ee Sergej Milinkovic-Savic. Xiddiga reer Spain ee Fabian ayaa si weyn loola xiriirinayaa kooxaha Madrid, Barcelona iyo Atletico Madrid. Saaxiibkiisa qadka dhexe ee Milinkovic-Savic, ayaa isna dhanka kale lala xiriirinayaa kooxaha waaweyn sida Inter, Juventus, United iyo PSG.
Yves Bissouma waxaa laga yaabaa inuu u dhaqaaqo Manchester City si uu badal ugu noqdo Fernandinho, Daily Star ayaa qortay. City ayaa la sheegayaa inay ku kalsoon tahay inay heshiis 30 milyan oo ginni ah kula soo wareegi karaan 24 jirka khadka dhexe ee kooxda Brighton. Daily Express, ayaa isna sheegaya in Arsenal ay hogaamineyso dagaalka loogu jiro ciyaaryahankan reer Mali, iyadoo Tottenham, West Ham iyo Everton sidoo kale ay macquul tahay inuu u wareego.
Chelsea ayaa laga yaabaa inay dib usoo celiso weeraryahankeeda Armando Broja iyagoo usoo bandhigaya heshiis qaali ah kaddib markii ay amaah ku siisay 19 jirkaan kooxda ka dhisan Eredivisie ee Vitesse Arnhem xilli ciyaareedkan, wariye Fabrizio Romano ayaa sidaas qoraya, laakiin kooxo kale oo waa weyn ayaa sidoo kale ku wareeganaya saxiixa laacibkan.
Daafaca dhexe ee Juventus Giorginio Chiellini ayaa ka fiirsanaya inuu u dhaqaaqo MLS-ka Mareykanka kaddib markii qandaraaskiisa uu yahay mid dhacaya bisha June, Calciomercato ayaa warinaysa.
Miralem Pjanic ayaa laga yaabaa inuu ka tago Barcelona iyadoo Sport ay sheegeyso in xiddigan khadka dhexe ka cayaara uu soo jiidanayo xiisaha kooxaha Chelsea iyo Inter.
Barca ayaa ka fiirsaneysa fikirka ah in loo ogolaado Francisco Trincao inuu amaah ku baxo iyadoo ay xiiseynayaan kooxaha Milan iyo Roma, sida laga soo xigtay Calciomercato.
RMC Sport ayaa sheegaysa in Milan ay mabda’ ahaan heshiis la gaartay in ay la soo wareegto goolhayaha Lille Mike Maignan dhammaadka xili-ciyaareedkan. Waxayse ku soo aadaysaa iyadoo shaki laga qabo mustaqbalka goolhayahooda Gianluigi Donnarumma, kaasoo lagu wado inuu noqdo cayaaryahan xor ah. Kaddib markii uu ka caga jiiday inuu cusbooneysiiyo heshiiskiisa, Donnarumma ayaa lala xiriirinayaa inuu u dhaqaaqo kooxaha Juventus, Tottenham, Chelsea iyo United oo dhammaantood daneynaya adeegiisa.
Milkiilaha Mustaqabalka Ee Gunners – Waa Maxay Sababta Uu Daniel Ek U Gudbin La’yahay Dalabkiisii Ugu Horreeyay?
Real Madrid Oo Diyaar U Ah Iney Iska Iibiso Eden Hazard Xagaaga